★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားအချင်းချင်း မီးရှို့သတ်တာကို ပျော်ရွှင်စွာကြည့်ပါ
ကုလားအချင်းချင်း မီးရှို့သတ်တာကို ပျော်ရွှင်စွာကြည့်ပါ
မွတ်ဆလင်တွေကို တကမ္ဘာလုံးက လူလို့အသိအမှတ်ပြုထားပေမယ့် အဆင့်နိမ့် လူတန်းစားတွေလို့ လက်ခံထားပါတယ်။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ရင် မွတ်ဆလင်တွေက အရမ်းကိုတက်ကြွပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေကို သတ်ဖြတ် ရိုက်နှက်ရတာကို သိပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မွတ်ဆလင်တွေကို ရှေ့ဆုံးမှာ မြင်ရပါတယ်။ သွေးသံရဲရဲနဲ့ မြင်ကွင်းကို သိပ်ကြီးစွဲလန်းနေသူတွေဆိုတော့ စစ်ဖြစ်ရင် သူတို့တွေ ပျော်ကြတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ စစ်တိုက် လူသတ်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ တမန်တော် မိုဟာမက်ကြီးရဲ့ ဒုတိယမြောက် နှစ်သက်ဆုံး ၀ါသနာပဲ မဟုတ်ပါလား? မိုဟာမက် အဓိက နှစ်သက်ဆုံးဝါသနာကတော့ ကြာကူလီရိုက်တာနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်လို့ ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။ ချွေးမကိုတောင် အလွတ်မပေးပဲ ကြာကူလီရိုက်တယ်ဆိုတာ လူထဲမှာ မပြောနဲ့ အီးအီးတွေစားတဲ့ ခွေးထဲမှာတောင် မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးပါ။
စစ်ပွဲ နဲ့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းမရှိတဲ့အချိန်မှာ မွတ်ဆလင်တွေကတော့ ငြိမ်ငြိမ်နေတယ် မထင်ပါနဲ့။ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတာပါ။ ဆန္ဒပြပွဲဆိုတာနဲ့ ကျက်သရေကင်းမဲ့လှပြီး ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချို့တဲ့နေတဲ့ ကုလားတွေကို လမ်းတွေပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လူလောကကြီးကို ဒုက္ခပေးရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေက သူတို့ပလီတွေကနေ ခွေးအူသံတွေ ထုတ်လွှင့်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးကြပါတယ်။ အိပ်ကောင်းချင်း မအိပ်ရ၊ စားကောင်းချင်းမစားရအောင် အသံနဲ့ နှိက်စက်တာကိုပဲ... တီထွင်ဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့ပဲ ကြံဖန်ချီးကျူးရမယ်ထင်ပါရဲ့။
စကားကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်… သူတို့တွေက အချင်းချင်းသတ်ရတာ ၀ါသနာထုံပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းမှာ အစ်စရေးက ကုလားတစ်ကောင်ကို သတ်ရင် hamas အဖွဲ့က သူတို့အချင်းချင်း ၁၀ကောင်ကိုသတ်ပါတယ်။ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်လို့ ဘယ်မွတ်ဆလင်မှ ကန့်ကွက်တာမလုပ်သလို … ဆန္ဒပြတာမျိုးလဲမလုပ်ကြပါဘူး။ အဲဒါကို ကျုပ်တို့တွေက သတိမထားမိကြဘူး။ ခွေးသားဖေါက်သလို ကလေးတွေကို မွေးကြပြီး အချင်းချင်းလည်း မညှာမတာ သတ်ဖြတ်နေတာဆိုလို့ လောကမှာ မွတ်ဆလင်ပဲရှိပါတယ်။ အထက်ကတော့ Kyrgyz တွေက Uzbekကို မီးရှို့သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ အသေဆိုးနဲ့သေတာ၊ စက္ကန့်နဲ့အမျှ ဒုက္ခတွေကြုံတွေနေတာ၊ စက္ကနဲ့နဲ့အမျှ ညှင်းဆဲခံနေကြရတာပါ။ မွတ်ဆလင်အသေဆိုးနဲ့သေတာ မထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမိုလို့ ဆောင်းပါးရေးပြီး တင်ပြစရာမလိုပါဘူး။ အခုဗီဒီယိုကလည်း ခွေးအချင်းချင်းကိုက်တာ . . နွားအချင်းချင်းခွေ့တာ. .. ကြက်အချင်းချင်းတိုက်တာကို စိတ်ဝင်စားသူများ အပျင်းပြေကြည့်ဖို့ပါ။ ဗီဒီယိုထဲမှာ မွတ်ဆလင်တွေ သူတို့အချင်းချင်းသတ်တာကို ပျော်ရွှင်နေတာကိုကြည့်နေပါတယ်။ အသတ်ခံရတဲ့ကုလားကို မသနားဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မမေးပါနဲ့။ မွတ်ဆလင်များက … သူတို့အချင်းချင်း မီးရှို့သတ်တာကို ပျော်ရွှင်နေတာ ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့နေရတာပဲ.. ကျုပ်တို့က ဘာလို့သနားရမှာလဲ? သူတို့လိုပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည့်နိုင်ကြိုးစားကြပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:52 AM